मुढाबाटै कमाई गर्दैछन् कैदीबन्दी ! | suryakhabar.com
Home आर्थिक मुढाबाटै कमाई गर्दैछन् कैदीबन्दी !
मुढाबाटै कमाई गर्दैछन् कैदीबन्दी !
on: २८ बैशाख २०७५, शुक्रबार १४:३५ In: आर्थिकTags: No Comments
इनरुवा । सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकामा रहेको क्षेत्रीय कारागार झुम्कामा रहेका ६०० भन्दा बढी कैदीबन्दीले मुढा बनाएर आय आर्जन गरिरहेका छन् ।
विभिन्न कारणले जेल जीवन व्यतित गरिरहेका कैदीबन्दी जेलभित्रै मुढा बनाएर आय आर्जन गर्दैआएका छन् । जेलका चौकीदार खड्ग राईका अनुसार कैदीबन्दीले मुढा बनाएर मासिक रु नौ हजारदेखि रु १२ हजारसम्म आम्दानी गर्दैआएका छन् ।
“कैदीबन्दीले मासिक पाँच हजारभन्दा बढी मुढा निर्माण गरी बिक्री गर्ने गरेका छन्,” राईले भने । मुढा बनाउन आवश्यक पर्ने धागो, बाँस, साइकलको टायर, डोरीलगायत सामग्री जुटाउन कारागार प्रशासनले सहयोग गर्दैआएको छ । कैदीबन्दीको कारागार जीवनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि मुढा बनाउन सामग्री जुटाएको उनी बताउछन् ।
कैदीबन्दीले समूहमा काम गरी समूहमै आम्दानीसमेत गर्ने गरेका छन् । आम्दानी भागबण्डा गरी कामको आधारमा लिने गरेको चौकीदार प्रेम लावतीले बताए। कैदीबन्दीले समूहमै टायर काट्ने, बाँसको टुक्रा बनाउने र डोरी तथा धागो लगाउने काम गर्नेगरेका छन् ।
कैदीबन्दीले मुढासँगै बाँसको रचनात्मक फूल, फुलदानी र विभिन्न खेलौना बनाई आम्दानी गरिरहेका छन् । उनीहरुले बाँसको कलात्मक हस्तकलाका सामग्री तयार गर्र्ने गरेका छन् । कच्चा पदार्थ हप्तामा एक पटक ल्याउने गरेको कारागारका जेलर गणेश अधिकारीले बताए । कैदीबन्दीले रु २०० को लगानीमा एउटा मुढा निर्माण गरी रु २८० सम्ममा बिक्री गर्ने गरेका छन् ।
“बिक्री गर्न बजारको समस्या छैन,” अधिकारीले भन्नुभयो । क्षेत्रीय कारागार झुम्कामा अहिले एक हजार ४३४ कैदीबन्दी रहेका छन् ।
रामायण सर्किट तथा जनकपुर–अयोध्या बस सेवा आजदेखि सरर
महिला संघको कार्यसमिति विस्तार
२१ जेष्ठ २०७७, बुधबार २०:५४
२१ जेष्ठ २०७७, बुधबार २०:२७
पाकिस्तानमा पनि बढ्दै कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित, मृतक पुगे १ हजार ६८८
२१ जेष्ठ २०७७, बुधबार १९:५८
१२ वर्षमा मर्मतसम्भार पछी यसरी रूप फेर्दै छ लुम्बिनी
बन्ने भो लालबन्दी–दुम्जा सडक, वैकल्पीक राजमार्ग बनाउने प्रयास
१.२५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपियो
एसइईबारे एकसाताभित्र निर्णय: शिक्षामन्त्री
२८ बैशाख २०७५, शुक्रबार १४:३५